Showing 41-60 of 472 items.
डिजे रेजिना धरान आइपुगिन्, कोरियामा म माथि दुर्व्यबहार भयो
धरान । कोरियामा कार्यक्रमका लागि गएर लुकेको आरोप लागेकी धरानकी डिजे रेजिना याख्खा (जेन) नेपाल आइपुगेकी छिन् । उनले आफुलाई कोरियामा लुगेको आरोप लगाइएको प्रति खण्डन गर्दै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उदेश्यले यस्तो आरोप लगाइएको बत�
प्रकाशित मितिः माघ 1, 2076
2762 पटक पढिएको
नाटक बसाई माघ ९ देखी प्रदर्शन हुँदै
नाटक बसाई धरानमा प्रदर्शन गरिने भएको छ । लिल बहादुर क्षेत्रीद्धारा लिखित उपन्यास &rdquo;बसाइ&rdquo; नाटकको माध्यमबाट प्रदर्शन गरिने भएको हो । उपन्यासकार क्षेत्रीको उपन्यासलाई नाटकमा रुपान्तरण गरेर धरानमा प्रदर्शन गर्न लागिएको नाटक
'फ्राइडे फिल्मस्स् रिलिज भएनन् नेपाली फिल्म, विदेशी फिल्मको पकड'
काठमाडौं &ndash; हरेक शुक्रवार नेपाली फिल्म जुधेर निर्माता मारमा पर्ने गर्थे । तर, यतिबेला भने नेपाली फिल्म हलमा कुनै फिल्म रिलिज भएका छैनन् । गत हप्ता पनि नेपालमा कुनै नेपाली फिल्म रिलिज नहुँदा हिन्दी फिल्मकै पकड देखियो । यो शुक्र
धरानको प्रतिनिधित्व गर्दै सामपरी मिस ग्ल्याम नेपालमा
धरान । धरानको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्झना परियार (सामपरी) मिस ग्ल्याम नेपालको फाइनल प्रतिपर्धामा पुगेकी छन् । आरोमा इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा हुने मिस ग्ल्याममा १८ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका अविवाहित किशोरीहरु प्रतिष्पर्धा गर्द�
बलिउडका तीन खान किन खेल्दैनन् एकैसाथ फिल्म ? 'सलमानले खोले यस्तो रहस्य'
बलिउडका तीन लोकप्रिय खान अभिनेताहरु एकैसाथ किन फिल्म खेल्दैनन् रु यो कुराले सबै फ्यानहरुको मनमा खुल्दुली हुने गर्छ । सलमान र शहारुख तथा सलमान र आमिरले एकै साथ चलचित्र खेलेका छन् । तर शहारुख खान र आमिरले भने कहिल्यै एकसाथ चलचित�
‘दबंग -३’ का भिलेन किच्चा सुदिपलाई सलमानले दिए 'बीएमडब्ल्यू' उपहार
बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले &lsquo;दबंग &ndash;३&rsquo; का भिलेन किच्चा सुदिपलाई डेढ करोडको गाडी उपहार दिएका छन् । सलमानले दबंग फ्रेन्चाइजीको तेस्रो फिल्मको सफलतापछि खलनायकको भूमिका निभाएका सुदिपलाई १.५४ करोडको बीएमडब्ल्यू कार उपहार दिए
एसईई स्टेट १ आइडलको दोस्रो संस्करण चैतमा
धरान । फक्ताङलुङ अनलाइन टिभिले आयोजना गर्ने एसईई स्टेट १ आइडलको सिजन २ आगामी चैत्रदेखि हुने भएको छ ।एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीहरुको सहभागीता हुने आइडलमा एक नं. प्रदेशका विद्यार्थीहरुको सहभागीता हुने गर्दछ । सोमबार पत्रकार सम
'दुई अवार्ड हात परेपछी फेसबुकमा ‘माग्नेबुढा’ले लेखे यस्तो'
पुष २० &ndash; सिजी इन्टरटेनमेन्टसँगको सहकार्यमा कामना मासिकले आयोजना गरेको &lsquo;सिजी कामना फिल्म अवार्ड&rsquo; को पाँचौं संस्करणको शनिबार सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक बर्ष आयोजना गर्दै हुने &lsquo;सिजी कामना फिल्म अवार्ड&rsquo; यस बर्ष पनि सम्पन्
अदित्यको फस्टलुक यस्तो लुक्स दर्शकको कौतुहलता अझै बढाइदिए ‘मलंग’
फ्रेवुअरी ७ तारिखबाट रिलिज हुन लागेको निर्देशक मोहित सुरीको चलचित्र &lsquo;मलंग&rsquo;को फस्टलुक रिलिज गरिएको छ । यो चलचित्रको फस्टलुकमा नायक अदित्य रोय कपुरलाई मात्र देखाइएको छ । अदित्य सुगठित शरीरका साथ देखिएका छन् । यो लुक्सले पनि
‘म पनि के कम’ सिजन १ को उपाधि विजयपुर स्कुलका सालिनलाई
धरान । म पनि के कम एकल अन्तर विद्यालय गायन प्रतियोगिता सिजन १ को विजेता विजयपुर स्कुलका सालिन श्रेष्ठ बनेका छन् । बिहिबार धरान ८ सभागृहमा आयोजित प्रतियोगिताको फाईनलबाट उनि विजेता घोषणा भएका हुन्&nbsp;। विजेता घोषणा भएसंगै उनले एक�